Oge nke ụbọchị maka Jenụwarị 16: akụkọ banyere San Berardo na ndị enyi | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Oge nke ụbọchị maka Jenụwarị 16: akụkọ banyere San Berardo na ndị ibe
(d. Jenụwarị 16, 1220)
Ikwusa ozi ọma na-abụkarị ọrụ dị ize ndụ. Hapụ obodo mmadụ ma mee ka ọdịbendị ọhụrụ, gọọmentị na asụsụ dị iche iche sie ike; mana martyite na-ekpuchi aja ndị ọzọ niile.
N’afọ 1219, site na ngozi nke St. Francis, Berardo hapụrụ Italytali ya na Peter, Adjute, Accurs, Odo na Vitalis ikwusa ozi ọma na Morocco. N'oge njem ahụ na Spain, Vitalis dara ọrịa wee nye ndị isi ndị ọzọ iwu ka ha gaa n'ihu na ozi ha na-enweghị ya.
Ha gbalịrị ikwusa ozi ọma na Seville, mgbe ahụ n'aka ndị Alakụba, mana ha agbanweghị. Ha gara Morocco, ebe ha mere nkwusa na ahịa. E jidere ndị ọchịagha ahụ ozugbo wee nye ha iwu ịhapụ mba ahụ; Ha jụrụ. Mgbe ha maliteghachiri ikwusa ozi ọma, otu eze na-ewe iwe kwuru ka e gbuo ha. Mgbe ha tachiri obi ike na iti ihe ike iji jụ okwukwe ha na Jizọs Kraịst, ndị isi ahụ bepụrụ isi n'isi ya na Jenụwarị 16, 1220.
Ndị a bụ ndị nwụrụ anwụ nwụrụ nke mbụ Franciscan. Mgbe Francis nụrụ banyere ọnwụ ha, o tiri mkpu: "Ugbu a ka m nwere ike ikwu n'ezie na enwere m Friars Minor ise!" A wetara ihe ncheta ha na Portugal ebe ha kpaliri nwa akwụkwọ Augustine na-eto eto isonyere ndị Franciscans wee pụọ gaa Morocco n'afọ na-eso ya. Nwa okorobịa ahụ bụ Antonio da Padova. Egburu mmadụ ise a nwụrụ n’afọ 1481.
Ọnwụ Berard na ndị òtù ya kpaliri ọrụ ozi ala ọzọ na Anthony nke Padua na ndị ọzọ. Enwere ọtụtụ, ọtụtụ ndị Francis zara ajụjụ ịma aka Francis. Kpọsa Oziọma ahụ nwere ike ịnwụ, mana nke a egbochighị ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ndị Francis bụ ndị ka tinyere ndụ ha n'ihe egwu ugbu a n'ọtụtụ mba ụwa.
Gini mere ndi nchu aja ji eji oji mgbe nile?